Dynmark yinkampani yobukrelekrele belifu esekwe e-UK kunye nemiyalezo. Babeke ndawonye le infographic ebonelela ngamanani anamandla okuxhasa iinzame zakho zokuthengisa ngentengiso ngokusebenzisa itekhnoloji yeselfowuni.
tags: dynmarkusetyenziso lweselulaurhwebo mobileIvenkile yokuthengisa eselfowuniIvenkileishishini lokuthengisaukuthengisai-SMSimiyalezo ebhaliweyo
I-infographic enkulu, enkosi ngokwabelana ngayo noDouglas. Ndilufumana luluncedo kakhulu uncedo lokugqibela abalunikayo ekugqibeleni "abathengisi abathembekileyo baya…". Imarike yefowuni ngokuqinisekileyo inikezela ngamathuba amahle kwixesha elizayo kwabo banezakhono ezaneleyo zokusebenzisa.